Mayelana NATHI - Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd.
IShijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd.yasungulwa ngo-2011. Umnikazi onolwazi olungaphezulu kweminyaka engamashumi amabili lokuhweba kwamanye amazwe nendawo yethu yokukhiqiza, manje sesikhiqiza futhi sithola imikhiqizo ehlukahlukene yokuthekelisa kumakhasimende emhlabeni jikelele. izimakethe zethu eziyinhloko zihlanganisa iYurophu, iNyakatho neNingizimu Melika, i-Afrika ne-Asia.
Njengamanje, izinto zethu eziyinhloko zifaka izingubo zokusebenza, okokuvula imvula, imikhiqizo yangaphandle, imikhiqizo yasendlini, imikhiqizo yokuphromotha nezinto zepulasitiki. Sinikeza le mikhiqizo ngokukhetha okuningi kosayizi, amamaki, imibala nezitayela. Uqinisekile ukuthi uzokwazi ukuthola okuthile okuzolingana nezidingo zakho. Ngaphezu kwalokho, sithatha ukulawula ikhwalithi ngokungathi sína. Ukuhlola imikhiqizo kuwo wonke umjikelezo wokukhiqiza, siyakuqinisekisa ukuthi sinikela kuphela ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu.
Njengoba inkampani yethu inwebela ezimakethe eziningi sifuna ozakwethu abasha bokuhweba. Sicela uxhumane nathi manje ngezincwadi zakho ezinemininingwane. Noma imiphi imibuzo izokwaziswa kakhulu.
IShijiazhuang Tidy Fashion Co., Ltd. ngumthengisi okhipha impahla yezimvula nezingubo zokusebenza. Kutholakala enyakatho ne-china, eduze nase-Beijing. Singomunye wabahola abakhiqizi abasenyakatho neChina bazo zonke izinhlobo zezingubo zemvula, izingubo zangaphandle, into yabantwana nezinye izinto zepulasitiki
Sinezimboni zethu zepulasitiki edolobheni lethu. Ukuqasha abasebenzi abangaphezu kwama-200, abangama-30 kulaba basebenzi babhekele ukuqondiswa kwamasu (td), ukulawulwa kwekhwalithi (qc) nezinqubo zokuphatha. Ngenkathi amalungu e-TD wonke okungenani anama-20years wesipiliyoni esifanele, abasebenzi be-QC nabo bangongoti ekuhleleni ukukhiqizwa nokuhlela ukulethwa kwe-oda. asigcinanga ngokuthola ulwazi olucebile lokuhwebelana kwamazwe omhlaba, kodwa futhi siphumelele nedumela lamakhasimende ngesimo sethu sokuzikhandla emsebenzini.
Imikhiqizo yethu ikhava: I-PVC, i-PEVA, i-EVA, i-PE, i-PVC / i-Polyester / i-PVC, i-100% yezingubo zemvula zenayiloni, Inayiloni (Taffeta / Oxford / Ripstop), 100% Polyester (Taffeta / Micro / Twill), 100% Ukotini, T / C impahla yokusebenzela, igobolondo elithambile amajakhethi, njll. sinethuba eliphelele ngentengo, ikhwalithi, nesikhathi sokulethwa. Lokhu kuyinzuzo yethu eyingqayizivele nenkulu kakhulu.